ဘယ်လိုမြေပဲခွံအလုပ် - ဗစ်တာ sheller စက်ကိုဘယ်လို
အခြေခံအားဖြင့်, အမျိုးမျိုးတို့ကို၏ဖွဲ့စည်းပုံနှင့်နိယာမ မြေပဲခွံ လက်ဖြင့်နို့တိုက်ကျွေးသည်, အလယ်တန်းအခွံများအတွက်နှစ်ဆစည်, လေမူလတန်း, ရွေးချယ်ခြင်းများအတွက်ဆွဲငင်အားခွဲခြာဆန်ခါ, မြေပဲသီးကိုဒုတိယအနှိမ်ခြင်းနှင့်အလိုအလျောက်အစာကျွေးခြင်း. 6HB-40B မြေပဲခွံကိုမော်တာဖြင့်ဖွဲ့စည်းထားသည်, ဘောင်, နို့တိုက်ကျွေးရေး, စပါးနယ်လှည့်, ပန်ကာ, ဆွဲငင်အားခွဲခြာဆန်ခါနှင့်အလယ်တန်းဓာတ်လှေကား, စသည်တို့. ဖွဲ့စည်းပုံရိုးရှင်းပြီးကျစ်လစ်သိပ်သည်းသည်.
စတင်ပြီးနောက်, မြေပဲခွံ၏အခွံများသည်လှည့်နေသော Rasp bar နှင့် Intaglio တို့၏ရွေ့လျားအားကြောင့်ဖြစ်သည်, ထို့နောက်အခွံများနှင့်အဆန်များသည်ဇယားကွက်မှတဆင့်လေပြွန်သို့ကျသည်, နှင့်ပန်ကာခွံထွက်မှုတ်. အပင်များနှင့်မညှပ်ထားသည့်သေးငယ်သောမြေပဲသည်မြေထုဆွဲအားခွဲစက်ထဲသို့ကျသည်. ခွဲထားသော kernel များကိုထွက်ပေါက်သို့အထက်သို့ပို့သည်။ သီးခြားမထားသည့်သေးငယ်သောမြေပဲသည်ဓာတ်လှေကားသို့အောက်သို့ပို့သည်။, မြေပဲသည်မြေပဲတစ်မျိုးလုံးကိုအခွံမကျက်မှီတိုင်အောင်အခွံမာသီးကိုမြေအောက်အနှံသို့ပြန်ပို့ရန်မြေအောက်လှိမ့်ပုံကိုမြေအောက်လှိမ့်ပို့သည်။. ပုံစံကဒ်နှင့်ဇယားကွက်၏ခွက်ပန်းကန်၏လည်ပတ်၏အင်အားအောက်မှာ, မြေပဲခွံနှင့်အခွံကွဲကွာလိမ့်မည်. အခွံပြီးနောက်, မြေပဲခွံနှင့်အစေ့များသည်ဇယားကွက်ထဲကျသွားသည်. လေပြွန်၌တည်၏, မြေပဲခွံအများစုသည်စက်ထဲမှထွက်လာသည်. မြေပဲစေ့များနှင့်ကျိုးပဲ့သောအပိုင်းအစငယ်များသည်မြေထုဆွဲအားခွဲခြားသည့်ဆန်ခါပေါ်ကျဆင်းသွားပြီးတုန်ခါမှုဖန်သားပြင်တွင်နှစ်ဖက်စလုံးသို့အသီးသီးရွေ့လျားနေစဉ်. မြေပဲစေ့သည်စွန့်ပစ်ဆိပ်ကမ်းမှဆင်းလိမ့်မည်, ကျိုးအခွံပန်းကန်ပန်ကာအားဖြင့်အခြားအဆုံးကနေထွက်မှုတ်မည်ဖြစ်ကြောင်းနေစဉ်. တစ်ချိန်တည်းမှာပဲ, unshelled မြေပဲဒုတိယသယ်ဆောင် device ကိုစလှေတျပါလိမ့်မည်, ဒုတိယခွံအဘို့အပို့ဆောင်ဆိပ်ကမ်းကိုမှသယ်ဆောင် Hopper မှတဆင့်.